PSG oo ogolaatay heshiiska uu Neymar Jr ugu biirayo Real Madrid, balse ku xirtay hal shuruurd – Gool FM
(Paris) 18 Juunyo 2019. Kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ayaa ogolaatay inay iibiso xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr isla markaana uu ku biiro Real Madrid inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaaga, balse waxay ku xirtay hal shuruurd.
Xiriirka ka dhaxeeya Neymar iyo maamulka kooxda Paris Saint-Germain ayaa u muuqda midaan wanaagsaneyn xiliyadii lasoo dhaafay, sidaas darteed waxay doonayaan inay iska fasaxaan xiddiga reer Brazil sababa la xiriira dabacadiisa aan wanaagsaneyn iyo dhaabacyadiisa oo noqday kuwo joogta ah.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa sheegay in maamulka kooxda Paris Saint-Germain aysan wax dood ah ka qabi doonin hadii ay Neymar Jr ku fasaxayaan qiimo dhan 220 milyan oo euros, balse haddii ay Real Madrid isugu imaadaan miiska wada hadalka ay hoos u dhigi doonaan qiimaha kor ku xusan, sababa la xiriira in PSG ay xiiseeneyso saxiixato ciyaaryahanka reer Brazil ee Casemiro.
Kooxda Paris-ka dhisan ee St Germain ayaa dhimi doonta lacagta ay ku dooneyso inay ku iibiso Neymar Jr, balse hal shuruud, taasoo ah in Real Madrid ay heshiiska qeyb kaga dhigto Casemiro.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Real Madrid aysan diidi doonin heshiiskan isdhaafsiga ah ay la gali doonto Paris Saint-Germain si ay u hesho adeega Neymar Jr, sababtoo ah Casemiro ayaa u muuqda midaan wax door ah ku yeelan doonin qorshaha tababare Zinedine Zidane xili ciyaareedka soo socda.